Cawad oo ku wajahan Sudan iyo ujeedka safarkiisa oo la ogaadey
MUQDISHO, Soomaaliya - Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya, Axmed Ciise Cawad ayaa safar uu ku tegi doona maalmaha soo socda Sudan, gaar ahaan magaaladda caasimadda ah ee Khartuum, sida laga soo xigtay illo xog ogaal ah.
Ujeedka safarka wasiirka ayaa la fahansan yahay inuu salka ku hayo ka qaybgalka shir ay yeelanayaan Wasiiro Arrima Dibadeedyadda dalalka Jamaacadda Carabta, kaasoo dhowaan ka dhici doona halkaas.
Shirkaan oo noqonaya midkii 150-aad ee Ururkaan ay yeeshaan dalalka xubinta ka ah Wasiiradooda Arrimaha Dibada ayaa waxaa looga arrinsanayaa xaaladda Soomaaliya, iyo sidii kaalmo dhaqaalo loogu fidin lahaa.
Sida laga soo xigtay qaban-qaabiyaasha kulanka, ajandayaasha ugu muhiimsan ee kulanka lagu gorfaynayo ayaa kala ah; Amniga, doorashooyinka 2020 ee dalka, Sal dhigidda Dastuurka, Nidaamka Xisbiyada Siyaasadda, Kobaca Dhaqaalaha iyo dib u qaabeynta Ciidamada Soomaalida.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in qodobadda shirka laysla soo qaadi doono ay qayb ka noqoneyso codsi ay gudbisay dowladda Soomaaliya oo ah inay la wareegto Shir gudoonka Gollaha iyo sanadka 2019-ka shir Jamaacadda Carabta lagu qabto magaalo madaxda dalka ee Muqdisho.
Soomaaliya oo kamid ahayd aas-aasayaasha Urur Jamaacadda Carabta, Woqoyga Afrika iyo kuwa kale oo Carbeed ayaa dalkeena waxaa lagu sheegaa inuu yahay midka kaliya ee Afrikaan rasmi ah, kaasoo Urur goboleedkaan xubin buuxda ka ah.
Khayre iyo Geelle oo kulmaya xilli ay jirto xiisad siyaasadeed
Soomaliya 06.08.2018. 19:03
Xiisadda labad wadan ayaa cirka isku shareertay kadib markii uu Madaxweyne Farmaajo yiri...
Khayre oo amray Diblomaasiyiin inay degdeg usoo galaan dalka
Soomaliya 19.08.2018. 00:13
Goorma ayuu furmayaa Kalfadhiga 4aad ee Baarlamaanka Soomaaliya?
Soomaliya 20.08.2018. 15:46
Mas'uuliyiin katirsan DF oo Musuq-maasuq loo xiray [Magacyadooda]
Soomaliya 18.08.2018. 22:24
Shirkii Brussels ee arrimaha Soomaaliya oo dib u dhacay [Akhri Sababta]
Soomaliya 20.06.2018. 17:05
Maxay kawada hadleen Khayre iyo Madaxweynaha Jabuuti?
Soomaliya 08.06.2018. 01:11
Jawaari oo xaqiijiyay in uu is casilay iyo Wararkii ugu dambeeyay
Soomaliya 09.04.2018. 21:37
Muudey oo shaaciyay Waqtiga codka loo qaadayo Mooshinka Jawaari
Soomaliya 03.04.2018. 17:47
Ciidanka DF geysay Gedo oo bilaabay in ay hubka "ka iibsadaan" Shabaab 20.02.2020. 17:15
Farmaajo oo "baadigoobaya" muddo kororsi laba sano ah 20.02.2020. 16:17
Jubaland oo diidey sharciyo uu ansixiyey baarlamaanka Soomaaliya 20.02.2020. 15:24
UN-ka oo baaraya habka maaliyadda iyo canshuuraha ee Al-Shabaab 20.02.2020. 15:00
Khayre oo booqdey ciidamo ay weerar ku dhaawacday Al-Shabaab 20.02.2020. 14:13
Soomaaliya oo safiirkii ugu horeeyay u magacaabatay Turkemenistaan 20.02.2020. 07:30